Ny dingana: avy amin'ny finamanana ny fifandraisana
Ianao mahita anao matetika kokoa, maka be dia be ny zavatra, fa ny finamanana madio tsy ampy ho anao. Horst Wenzel manazava ny Lahatsary vaovao dingana izay ianao hampitomboana ny finamanana madio ny fifandraisana atao. Ianao dia hianatra ny toro-hevitra lehibe mikasika ny zavatra azonao atao, mba tsy ianao ihany, fa koa te fifandraisana. Toy ny zavatra tokony hatao voalohany dia ny, mazava ho azy, ny be dia be. Ataovy azo antoka fa tsy ny faharoa, ary tsy maro fanta-Daza avy misy faribolana ny namana nisarika.
Indrindra fa ny zavatra izay manolotra be dia be ny Hetsika dia soso-kevitra, ohatra, ny roller coaster mitaingina eo ny voly parks. Fa manosika ny adrenaline ny sehatra, izay dia manadala ankizilahy ao tsara indrindra. Raha manana ny tsy fahampian’ny hevitra, manana lisitra goavana ho zavatra atao amin’ny Daty voalohany, dia afaka mampiasa mazava ho azy fa ny faharoa na fahatelo Daty. Ianao angamba iray alina rehefa avy roa nisy zavatra miara-misotro ao an-crate ary niantsona. Izany manamora zavatra izany, satria raha toa ka efa fifandraisana ara-batana ianao amin’ny tsirairay, ny sakana voalohany dia atao, ary tsy afaka ny ho azo antoka fa ny tena mampahatahotra indrindra dia be namana faritra. Koa ny firaisana ara-nofo am-bava dia afaka manampy amin izany. Ary ny tena zava-dehibe, dia tsy resin-tory rehefa avy Firaisana ara-nofo. Hamihina fa kosa avy eo, dia toy izany no, ny firaiketam-po hormonina dia namoaka, ka mahatonga ny fifandraisana samy hafa dia raikitra. Ataovy azo antoka fa tsy hahita, ary izay tsy tapaka zavatra mba miandrandra. Raha toa ianao aorian’ny Fivoriana ihany rehefa afaka herinandro vitsivitsy, dia hanorina be dia sarotra kokoa ny fihetseham-po ho an’ny vehivavy. Fa tsy, izany dia zava-dehibe ny mahatsapa ianao fa ny lehilahy iray dia afaka miantehitra sy ny tatitra tsy tapaka. Asa manan-danja, tokony ho amin’ny mazava ankehitriny. Inona ny orinasa manampy ihany koa, raha toa ka ireo mila ho nomanina ho amin’ny fotoana maharitra. Ohatra, afaka levitra fampisehoana tapakila ho anao, izay ny hetsika atao dimy volana manomboka izao. Afaka mazava ho azy fa boky iray fialan-tsasatra. Manana mpiara-Barotra ao amin’ny ho avy, dia samy afaka miandrandra. Ianao dia ho aseho koa ny ny zava-misy fa izy dia tsy afa-tsy ny Eto sy ny Ankehitriny no zava-dehibe, fa te ihany koa ao anatin’ny roa volana mba hihaona aminy. Ny Ny singa manan-danja mba hitondra ny firahalahiana amin ny Satan’ny fifandraisana, ny fianakaviana sy ny namana. Azo antoka fa ny fianakaviana sy ny Namana mahazo ny mahafantatra, ary ianao koa mahazo ny fianakaviana, ary ny namany avy ny fotoana ny fotoana ny tavanao. Ny fianakaviana ny hafa hihaona ho an’ny maro fa mahafinaritra teboka, satria fantatrao izay hitranga amin’ny ray aman-dreny trano ny hafa. Na izany aza, dia hijinja, dia tombontsoa lehibe. Ny voalohany dia ny hoe tombontsoa ny nofy zazavavy dia hahazo ny fahafahana mangataka ny namana tsara indrindra na ny reniny avy eo, inona no mba hitandrina izany avy aminao. Ary ny hevitry ny namana tsara indrindra sy ny reniny no tena zava-dehibe. Miezaka izy, noho izany, dia foana ny vehivavy sakaizany.
Tsy hoe ny Namana manoro hevitra raha tsy izany
Ankoatra izany, ny Rehetra dia manana tombony faharoa. Raha toa ianao ka matetika ao amin’ny Fivoriana, na antoko, na ho ela na ho taty aoriana Namanao, na ny namany avy antso na ianao raha ny marina miaraka. Izany dia hanampy anao hieritreritra bebe kokoa ny mahafantatra ny Zava-misy eo amin’ny roa ianao. Farany, dia tena soso-kevitra raha toa ka nitsabo azy fotsiny toy ny hoe izy dia ny olon-tiany. Manoratra ao amin’ny hariva, ny SMS ianao te-hanana ny tsara alina, maka-tongotra ary avy hatrany ny Tananao, omeo azy ny hanoroka ny fiarahabana. Tsy mahatsapa ny zava-misy fa ianao tena hihaino. Koa, ny tanjona dia ny ho ny namana tonga, haingana be, raha toa ka efa manao toy ny raha toa ka ny namana. Ny olona tsirairay dia manana ny fitiavana ny teny izay naneho ny fihetseham-po any amin’ny Mpiara-miasa. Avy ny finamanana na ny raharaha eo amin’ny fifandraisana dia haingana kokoa raha toa ka miteny toy izany koa ny fitiavana ny teny. Izany dia mety ho ny fanomezam-pahasoavana, mikasika, na ny zavatra nataony ho anao. Ho anao izao no fotoana mba afaka ny fitiavana ny teny
← Ny vehivavy mihaona amin'ny lehilahy iray avy any amin'ny Aterineto izay mahita izany koa ny aizim - izany no valin HuffPost Alemaina
Video Mampiaraka Cheetal, India, Mangalore, te-hihaona amin'ny lehilahy age - taona →